fandrafetanaboitier [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/f/f6a722ece0874e6590dd95eb7f10404d.xhtml failed
Rehefa hanambatra solosaina, tsara raha apetraka anaty boitier aloha ny reni-karatra vao apetraka ny singa hafa rehetra mba tsy ho voahozongozona izay efa mahazo toerana.
Mifono ireo piesy mamorona ny unite centrale no asan’ny boitier. Ny unite centrale moa no tena misy ny ain’ny solosaina. Efa misy toerana natokana ho an’ireo karazana piesy tsirairay izany ao anatin’ny boitier.
Amin’izany dia manana asa telo izy: manome endrika an’ilay solosaina, ary manome ny angovo elektrika ampihodinana azy (alimentation), ary miandraikitra ny fampivezivezena rivotra ao anatiny izay ilaina amin’ny fampangatsiahana. Arakaraka izay mahafinaritra anao sy izay hanaovanao an’ilay solosaina no hisafidianana azy, fa tsy misy fitsipika manokana. Tsara foana anefa raha afaka manome puissance ambonimbony izy.
Ilaina mitovy aloha ny format-n’ny boitier sy ny reni-karatra. Mety misy karazany izy, ATX no tena betsaka, fa ao koa ny AT, ITX, sns ...
Fametrahana ny reni-karatra
Rehefa mitovy format ireo dia tokony hifanandrify avy hatrany ireo lavaka hasiana ny vis. Alohan’ny hametrahana azy dia mila apetraka aloha ireo tohana ao anelanelany mba tsy hifampikasika mivantana ny velaran’izy roa. Indraindray mbola misy vy fiarovana an’ireo ports mivoaka any ivelany, ka tsy hadinoina koa iny. Dia apetraka amin’izay ny vis, ary hidiana tsara tsy hihetsiketsika.
Connecteurs mila apetraka
Ireto avy ireo connecteurs mila apetraka matetika:
- alimentation an’ny reni-karatra;
eo amin’ny reni-karatra:
avy any amin’ny boite alim:
Jereo tsara amin’ny bokin’ny renikaratra fa indraindray misy roa ny connecteur alim mila apetraka.
- bokotra power sy reset;
- LED temoin-n’ny power sy kapila henjana;
- USB eo anoloan’ny boitier
Mba hahafantarana an’ireo dia mila jerena amin’ny bokin’ilay reni-karatra. Tokony ho ohatrohatra an’izao izy:
Tohiny: Fametrahana processeur
fandrafetanaboitier.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43